စျေးနှုန်းကောင်းနှင့်အတူလက်ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်လက်စွပ်ထုတ်လုပ်သူ - 1D; တစ်ခု | 1D;ONE
1D; စျေးနှုန်းကောင်းနှင့်အတူလက်ကားပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပစ္စတင်လက်စွပ်ထုတ်လုပ်သူများ - 1D; တစ်ခု, စျေးကွက် orientated& ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု - တိုက်ရိုက်ဆိုင်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးရုံးဖွင့်ပါ,
1. Toyota, Honda, Suzuki, Dafa နှင့် Nissan Gasoline အင်ဂျင်များသည် Outer Circle Plew လက်စွပ်, ဒုတိယမြောက်သတ္တုစပ်, NPR ပုံသဏ္ olo ာန်, အရောင်ကုဒ် (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ) နှင့် t ကိုရိုက်ထည့်ပြီး t ကိုသို့မဟုတ် n ကိုရိုက်ထည့်ပါ, လက်စွပ်တစ်ခုစီကိုအရောင်ကုဒ် (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ) နှင့်ပက်ဖြန်းထားသည်။
2 ။ လက်စွပ်မှုန်ရေမွှားအရောင် code (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ)
3. Isuzu Diesel Engine သည်မူလလုပ်ငန်းစဉ်, ဘေးထွက် plating (3) ခုသို့မဟုတ်လေးဘက်မှာသုံးခုပြားချပ်ချပ်ပြားလေးပြား, ရေနံလက်စွပ်နှင့်ကြီးမားသောအပေါက်များနှင့် polytetrafluoroethylene လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ T ကိုရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ် N ကိုလက်စွပ်မှုန်ရေမွှားအရောင်ကုဒ် (အနီရောင်, အဝါရောင်နှင့်အပြာ)
Linux သို့မဟုတ် Windows ကဘာလဲ
ပစ္စတင်လက်စွပ်၏လုပ်ဆောင်ချက်များမှာတံဆိပ်ခတ်ခြင်း, ထိန်းညှိခြင်း (ရေနံထိန်းချုပ်မှု), အပူပေးချေမှု (အပူလွှဲပြောင်းခြင်း) နှင့်လမ်းညွှန်ချက် (အထောက်အပံ့) ။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း - ၎င်းသည်ဓာတ်ငွေ့ကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုတံဆိပ်ခတ်ခြင်း, Air Diakage သည်အင်ဂျင်၏စွမ်းအားကိုလျှော့ချရုံသာမကဓာတ်ငွေ့လက်စွပ်၏အဓိကတာဝန်ဖြစ်သောရေနံကိုလည်းယိုယွင်းစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အင်ဂျင်နီယာ (ရေနံထိန်းချုပ်မှု) ကိုချိန်ညှိပါ - ဆလင်ဒါနံရံပေါ်ရှိချောဆီလျှပ်စစ်ဆီသို့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးထားပါ။ ရေနံ။
ခေတ်မီမြန်နှုန်းမြင့်အင်ဂျင်များတွင်ရေနံရုပ်ရှင်ကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ပစ္စတင်လက်စွပ်၏အခန်းကဏ္ for ကိုအထူးဂရုပြုသည်။ အပူရှိန် - ပစ္စတင်၏အပူသည်အအေးခန်းအခန်းကဏ္ plays မှတစ်ဆင့်ပစ္စတင်လက်စွပ်မှတဆင့်ဆလင်ဒါလက်စွပ်သို့ကူးစက်သွားသည်။ စိတ်ချရသောအချက်အလက်များအရ 70 ~ 80% သည်အအေးခံသောပစ္စတင်တွင်ရရှိသောအပူရှိန်မှရရှိသောအပူ၏ 70% သည်ပစ္စတင်လက်စွပ်မှတစ်ဆင့်ပစ္စတင်လက်စွပ်မှတစ်ဆင့်ဆလင်ဒါကွင်းသို့ကူးစက်သည် ပစ္စတင်လက်စွပ်; ပံ့ပိုးမှု - ပစ္စတင်လက်စွပ်သည်ပစ္စတင်နှင့်ဆလင်ဒါနံရံများအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုတားဆီးရန်ပစ္စတင်ရှိပစ္စတင်တွင်ပစ္စတင်ရှိပစ္စတင်တွင်ကာကွယ်ရေး, ပစ္စတင်၏ချောမွေ့မှုကိုလျှော့ချရန်နှင့်ပစ္စတင်ကိုဆလင်ဒါမခေါက်တားဆီး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်၏ပစ္စတင်သည်ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်နှစ်ခုသည်ဓာတ်ငွေ့ကွင်းနှင့်ရေနံလက်စွပ်နှစ်ခုကိုမွေးစားသော်လည်းဒီဇယ်အင်ဂျင်သည်များသောအားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့အင်ဂျင်နှင့်ရေနံလက်စွပ်နှစ်ခုကိုမွေးစားလေ့ရှိသည်။
1D အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ CO ။ , LTD ။ အင်ဂျင်အဆို့ရှင်၏ကျယ်ပြန့် gamut ၏ကျော်ကြားသောလက်ကမ်းစာကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းချသူများသည်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အခြားဆက်စပ်မှုဖြစ်စဉ်များကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ရန်ခေတ်မီနည်းပညာကိုအသုံးပြုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်ကိုနားလည်ရန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်နှင့်အချင်းချင်းတစ် ဦး ချင်းစီ၏စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်ရန်အတွက်ပစ္စည်းများကိုအချိန်မီနှင့်အပြိုင်အဆိုင်နှုန်းထားများဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အသင်းအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။